FANAGADRANA MPANAO GAZETY : Mila mandray lesona tamin’ny teo aloha ! - Informations et Actualités sur Madagascar
Politique FANAGADRANA MPANAO GAZETY : Mila mandray lesona tamin’ny teo aloha !
FANAGADRANA MPANAO GAZETY : Mila mandray lesona tamin’ny teo aloha !
by Alpha world on 10 h 58 in Politique
Mandalo io seza hitoerana isan’andro io fa tsy natao haharitra, ka hanaovana jadona entina hampitahorana mpanao gazety.
Tsy manaiky lembenana intsony anefa ireto farany fa dia hitroatra hanohitra tanteraka ny fanohintohinana ny asa sy ny fahalalahan’ny mpanao gazety, indrindra ny fanagadrana mpanao gazety.
Tao anatin’ity Repoblika fahefatra, izay nijoro volana vitsy ity, no Fitondrana sahy nanagadra mpanao gazety teto Madagasikara, noho ny famoaham-baovao. Tsy mankasitraka izany anefa ny ankamaroan’ny olona satria fomban’ny Fitondrana taloha efa nahatonga olana teto amin’ny Firenena izany.
Ny tena mahavalalanina dia entina hampitahorana mpanao gazety ny ity fomba ratsin’ny mpitondra ity ary izao haverin’ny Hvm izao. Lasa « virus » ho an’ny mpitondra mifandimby izany nefa tsy mampaharitra ela azy eo amin’ny toerany akory fa vao mainka aza, hanena ny fitoerany eo ambonin’io seza mampanaotao foana io. Tsy mety mandray lesona ny amin’ny zavatra efa nisy izay mahazo io seza io fa dia hanao fanararaotam-pahefana hatrany no masaka an-doha.
Raha haverina kely ny tantara nahateraka ny Fitondrana tetezamita dia ny fanakatonan-dRavalomanana Marc ny fahitalavitra Viva raha nandefa ny fanehoan-kevitra nataon’ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Vokatr’izay dia raikitra ny tolona ary nangataka ny hanesorana ny minisitra roa lahy tao anatin’ny fotoana fohy ny olona saingy nanao mafy loha ny Fitondrana, ka dia niafara tamin’ny tolom-bahoaka nanonganana tanteraka ny Fitondran-dRavalomanana ny hetsika.
Manomboka izao, dia tsy hilefitra intsony amin’ny fanaovana tsinontsinona ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety. Tsy miantefa amin’ny mpitondra fanjakana fotsiny ihany izany fa voakasika avokoa ireo mpitandro filaminana mpanao famotorana sy ny mpitsara.
Efa nisy mpitondra niady tamin’ny « Mass media » tany aloha tany ary dia niongana teo amin’ny Fitondrana, amin’ny zavatra tsy dia misy dikany akory, ka hisintonana lakolosy.
Nanomboka ny hetsika ataon’ny mpanao gazety ary tsy hifarana raha tsy tonga amin’ny tanjona tiana ho tratrarina, dia ny fahalalahan’ny asa fanaovan-kazety sy ny fahalalahana maneho hevitra. Aoka hifarana hatreo ny fanagadrana mpanao gazety satria dia ho ratsy fijery amin’ny vondrona iraisam-pirenena indray i Madagasikara manomboka izao ary tantara tsy ho adinoina izao fanagadrana mpanao gazety amin’ny Repoblika fahefatra izay vao nijoro fito volana izay.
By Alpha world at 10 h 58